Ladoany : ampiasaina ny “Sydonia world” | NewsMada
Ladoany : ampiasaina ny “Sydonia world”
Nanomboka tamin’ity taona 2017 ity, ampiasain’ny sampandraharahan’ny haban-tseranana na ladoany ny fitaovana informatika, ny logiciel « Sydonia world ». Tsiahivina fa ampiasaina amin’ny fikirakirana ny asa mikasika ny ladoany ity fitaovana ity. Ao anatin’izany ny fanambaran’ny mpandraharaha tompon’ny entana, mandalo ny sampandraharahan’ny haban-tseranana. Marolafy ity logiciel « Sydonia world » vaovao ity, tsara kokoa miohatra amin’ireo teo aloha, ny Sydonia ++ sady mameno ny banga tamin’ireo tsy ampy.
Manohana ny ladoany Malagasy amin’ny fanatsarana ny fitaovana ny fikambanana iraisam-pirenena Cnuced, tarihin’ny teknisianina Idris Elmi Doubed, inspekteran’ny ladoany sady manam-pahaizana ao amin’ity rafitra ity.
Nisy fampahafantarana bebe kokoa mikasika ny Sydonia world, ny 31 marsa teo. Anisan’ny ny nohazavaina ny tombontsoa mikasika ny fitantanana ny fanambarana ny entana, ny fandraisana an-tsoratra, ny zavatra ahina hitranga, ny fanarahana ny fifanakalozam-bola, ny fomba fandoavam-bola, ny fiarovana, ny mampiavaka azy, ny fitazonana ny tsiambaratelo tsy azo lazaina, sns.